နည်းပညာအရှိန်အဟုန်ဖြင့်ပညာရေး | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2009 တနင်္ဂနွေ, မေလ 29, 2016 Douglas Karr
မနေ့ညကငါစကားပြောခွင့်ရခဲ့သည် IUPUI ရှိ CIT 499 အတန်း ဘို့ ဒေါက်တာသောမတ်စ်ဟို။ ၎င်းသည်အလုပ်ခွင်ထဲသို့မ ၀ င်ရောက်သောကျောင်းသားများ၊ အချို့သောသူများနှင့်လက်ရှိတွင်နည်းပညာတွင်အလုပ်လုပ်နေသောကျောင်းသားများနှင့်စေ့စပ်ထားသည့်အတန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့ကိုစကားပြောတဲ့အခါစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဘယ်လိုစတင်ကျင့်သုံးလာတယ်ဆိုတာကိုကျနော့်အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေလိုက်သည်။ ဤသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး retention ကိုနှင့်ဝယ်ယူမော်ဒယ်များနှစ် ဦး စလုံးပါဝင်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ညှိရန်ကြိုးစားနေသော်လည်းအချို့ကုမ္ပဏီများသည်မည်မျှပြောင်းလဲသွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။
ငါတို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်ရတယ်။ ငါဒီမယုံနိုင်စရာဗီဒီယိုကိုမျှဝေခဲ့သည် မေီ Stark အတန်းအတွက်ငါ့ကိုပို့
ကျွန်ုပ်တို့၏ CIT ဘွဲ့ရများအနေဖြင့်အခြေခံအဆောက်အအုံသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းအတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောမယုံနိုင်လောက်အောင်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာစွမ်းအားသည် ၀ ယ်ထားသောဟာ့ဒ်ဝဲမှဝေးလံသောတိမ်များသို့ရွေ့လျားနေသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဆော့ဖ်ဝဲကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်သလဲ၊ ဘယ်လိုပို့တယ်၊ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုဘယ်လိုဖြန့်ဝေသလဲ၊ အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအသစ်ဘယ်လိုစမယ်ဆိုတာပြောင်းလဲနေတယ်။ သူတို့က Indianapolis ရဲ့ BlueLock ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ hosting တစ်ခုဆီလည်ပတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုအဖွဲ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် Lifeline ၏ Eastgate Mall သည် datafarming ၏အနာဂတ်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ရန်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ CIT ဘွဲ့ရများဆော့ဝဲလ်သို့ ၀ င်ရောက်ရန်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆော့ဝဲသည်တစ်ခုတည်းသောအနာဂတ်ဖြစ်သည်။ မီဒီယာပေါ်တွင် software တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းပုံစံအဟောင်းသည်အားနည်းချက်များ၊ စျေးကြီးပြီး SaaS ၏အလားအလာနည်းပါးသည်။ လူအများစုသည်ဆော့ဝဲလ်ဖြန့်ကျက်မှုပုံစံအဟောင်းကိုမျက်နှာသာပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း of SaaS of စီးပွားရေးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလျင်မြန်စွာကြီးထွားရန်၊ အမြတ်အစွန်းဖြစ်လာစေရန်နှင့်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုဆက်လက်တိုးတက်စေရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလျင်မြန်စွာထောက်ပံ့နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောထူးခြားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကောလိပ်ကျောင်းသားအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်မဖိနိုင်ပါ ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှု လုံလောက်သော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများအားအွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသင်ကြားခြင်း - စီမံကိန်းများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ၀ က်ဘ်သို့ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ၎င်းတို့အကြောင်းကိုဘလော့ဂ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်ဆံရေးကိုပျိုးထောင်ရန်ကွန်ရက်များသည်ကောလိပ်မှထွက်ပြီးအောင်မြင်သောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်သို့တက်လှမ်းရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်များဖြစ်သည်။ ငါတို့အားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်ကုမ္ပဏီများကသင့်အားအဆီကျစေမည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ရက်ပေါင်းများစွာသဘောတူမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အလုပ်ကကြာပြီ။ အွန်လိုင်းပေါ်တွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်ရှိခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်နှုတ်ဆက်ခြင်းတို့ကိုစတင်ခြင်းအားဖြင့် - သင်တံခါးဖွင့်ထားသောနေရာအနည်းငယ်တွင်ရိုက်ချက်တစ်ခုရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။
Dr. Dr. Ho နှင့် CILT ဥက္ကChair္ဌ Stephen Hundley ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် IUPUI ငါအတန်းနှင့်အတူငါလေ့လာသင်ယူသောအရာကိုမျှဝေဖို့အခွင့်အလမ်းဘို့။ IUPUI ၌ ၀ န်ထမ်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မည်မျှမယုံနိုင်လောက်အောင်လုံလောက်စွာမပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းတို့ကဲ့သို့သောဒေသတွင်းစွန့် ဦး တီထွင်သူများနှင့်လူမှုမီဒီယာများကိုသူတို့ဖွင့်ပေးခြင်းသည်သူတို့နည်းပညာ၏အမြန်နှုန်းဖြင့်ပညာရေးကိုရွေ့လျားရာတွင်မည်မျှအလေးထားကြောင်းဖော်ပြသည်။
IUPUI သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားတွင်အထူးနေရာတစ်ခုရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သားသည်ကျောင်းတက်နေသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဘီလ်သည် IUPUI မှသင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒဘာသာရပ်တွင်သင်္ချာဓာတ်ခွဲခန်းမှနည်းပြဆရာဖြစ်ပြီးသူသည်ရူပဗေဒဆိုင်ရာသုတေသနအချို့ကိုစတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ IUPUI သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သားကိုနေ့စဉ်နှင့်အသစ်သောစိန်ခေါ်မှုအခွင့်အလမ်းများသို့တိုးချဲ့ရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်အားပေးခြင်း။ သူသည်မကြာသေးမီက ၀ န်ထမ်းများမှရွေးချယ်ခံရခြင်းဖြစ်သည် Barry Goldwater ပညာသင်ဆု!
Tags: barry goldwater ပညာသင်ဆုcitပညာရေးiupuiရူပဗေဒstephen Hundleyသောမတ်စ်ဟိုတက္ကသိုလ်